TweetSeeker: Chọta Gị Ọzọ Soro | Martech Zone
Tọzdee, Machị 28, 2013 Mọnde, Febụwarị 8, 2016 Douglas Karr
Ezigbo enyi na onye ọrụ ihe ọrụ ibe ya, bụ Kevin Mullett gosipụtara nnukwu ngosi na nso nso a gburu ngwaọrụ dị n'ịntanetị maka ọchụchọ na mgbasa ozi mmekọrịta. M na-n'ezie na-aga site na ndepụta iji jide n'aka na anyị na-ewebata ụfọdụ n'ime ndị a ngwaọrụ na Martech Zone (ụfọdụ n'ime ha bụ nke ụnyaahụ SEO Ngwaọrụ ndepụta!).
@IGIHE bụ ụzọ iji dozie ma hazie ndepụta nke akaụntụ Twitter ịchọrọ ịgbaso. Oge ikpo okwu na-enye gị ohere ime onye ọrụ Twitter ọ bụla okwu ma ọ bụ ahịrịokwu. I nwekwara ike iji mkpado dị n'ime iji zoo, soro ma ọ bụ ọbụna pụta ìhè ma dozie tweets onye ọrụ.
Usoro ahụ na-enye ohere maka nzacha dị elu, gụnyere nyocha site na ụbọchị, n'ime akaụntụ ahụ, n'ime akaụntụ gị n'izu gara aga, n'ime ụmụazụ gị, site na ọnọdụ, site na ndị na-eso ụzọ, site na nkebi ahịrịokwu, site na TPower ha, site na asụsụ ma ọ bụ site na njikọ . I nwekwara ike duplicated ndepụta site na onye ọrụ ma ọ bụ ewepu site na nkebi ahịrịokwu nakwa!
Tags: curate na-eso ụzọiyo twitterchọta akaụntụ twitter-eso ụzọhazie twitterchọọ tweeterikeOnyedikachiogo twitter
Etu ị ga - esi mekota Usoro Ọdịnaya Gị na Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi